के हो सर्पयोग ? कसरी यसको निधान गर्न सकिन्छ ? « Khabar24Nepal
के हो सर्पयोग ? कसरी यसको निधान गर्न सकिन्छ ?
साउन १०, काठमाडौं । सर्पयोग ज्योतिष शास्त्र अनुसार नराम्रो योग हो जसका कारण मानवले अरु असल योगहरुबाट पाउनु पर्ने राम्रा फलहरु पनि २५ प्रतिशतमात्र पाउने गर्छ। सर्पयोगबाट पिडित व्यक्तिहरुले सपनामा मृत्यु भएका मानिसहरु देख्ने गर्छन् र प्राय: सपनामा देखिने व्यक्तिहरु आफ्नै परिवारका हुने गर्छन्। यस योगबाट प्रभावित व्यक्तिको सपनामा, आफ्नो घरको छायाँ देखिने र व्यक्तिलाई कसैले उसको शरिर र घाटीमा थिचिरहेको जस्तो आभाष हुने हुन्छ। त्यस्तै गरी, सपनामा नदी, ताल, पोखरी, समुन्द्र आदि देखिनु पनि सर्पयोगको लक्षण हुन।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार सर्पको योगबाट प्रभावित व्यक्तिहरु समाज एवं परिवार प्रति समर्पित हुन्छन् तर आफ्नो निजी इच्छा प्रकट नगर्ने र आफ्नो सुखको पनि मतलव गर्दैनन्। उनीहरुको जीवन संघर्षले भरिपुर्ण हुने गर्दछ। विरामी भएको र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा एक्लोपन महशुस हुने र जीवन बेकार लाग्ने पनि सर्पयोगको लक्षण हो। सर्पको योगमा परेका व्यक्तिहरु सर्पदेखि डराउने हुन्छन्। उनीहरुलाई सर्पले डस्ने (टोक्ने) डर लाग्दछ। सपनामा शरीर सर्पले बेरिएको देख्नु या सर्पको सपना आउनु पनि यस योगका लक्षण हुन्। यसका साथै उचाइमा जाँदा डर लाग्ने, मनमा अशान्ति हुने र सुनसान स्थानमा जाँदा डर लाग्ने हुन्छ।
सर्पयोगको अनिष्टकारी प्रभावबाट बच्नको लागि शास्त्रमा बताइएको उपाय अनुसार प्रतिदिन पञ्चाक्षरी मन्त्र, “ॐ नम: शिवाय” अथवा महामृत्युञ्जय मन्त्र १०८ जप गर्नु पर्दछ। कालो अकिकको मालाले राहु ग्रहको बीज मन्त्र १०८ पटक जप गर्नु पर्दछ, शनिवारको दिन पिपललाई पानी चढाउनु पर्दछ, नागपञ्चमीको दिन व्रत राखी नागदेवको पूजा गर्नु पर्दछ, मयूर पंखधारी भगवान् कृष्णको पूजा गर्नु पर्दछ, शनिवार या पञ्चमी तिथिको दिन बगेको पानीमा ११ नरिवल प्रवाहित गर्नु पर्दछ, धातुबाट बनेको १०८ नाग-नागिनीको जोडी बगेको पानीमा प्रवाहित गर्नु पर्दछ, सोमवारको दिन विद्वान् पण्डितबाट रुद्राभिषेक गर्नु पर्दछ र सर्प गायत्री मन्त्रको जप गर्नु पर्दछ। यी उपायहरु अपनाउनाले सर्पयोगको अनिष्टकारी प्रभावमा कमी हुनेछ र यसको कारणबाट भविष्यमा कुनै अवरोधको सामना गर्नु पर्दैन।
डा. उत्तम उपाध्याय न्यौपाने लाई ९८५१०७१०८० र ०१(५२४११३३ र ९८५१०८६२१३ मा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ ।
आजको मौसम : देशका केही स्थानहरुमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग सहित वर्षा
लकडाउनमा बिनाकाम निस्किनेहरु लाई वडा प्रहरी नेपालगन्जले कार्वाही गर्दै
लायन्स क्लबद्धारा जनमैत्री अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
जबरजस्ती करणीको आरोमा आफ्नै बाबु पक्राउ
एफए कपको उपाधिका लागि म्यानचेस्टर सिटी र वाटफोर्ड भिड्ने